Pelosi: Trump ma mudna xil ka qaadis | Biyoguurenews.com
Home Wararka Pelosi: Trump ma mudna xil ka qaadis
Afhayeenka Aqalka Wakiilada Mareykanka, Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay xil ka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Trump, ayada oo sheegtay inuusan mudneyn, inkasta oo ay taasi si aad ah u doonayaan qaar ka mid ah xubnaha bidixda fog ee xisbigeeda dimoqraadiga.
Wareysi ay siisay Washington Post ayay Pelosi ku sheegtay “ma taageersani xil ka qaadis lagu sameeyo Trump”
“Illaa ay jiraan caddeymo aad u weyn iyo taageero labada dhinac ah mooyee, ilama ahan inaan waddadaas marno, sababto ah waxay kala qeybineysaa waddanka” ayay tiri Pelosi.
Hadalka Pelosi ayaa muujinaya is-beddel ku yimid dimoqraadiga oo markii hore si aad ah u aaminsanaa in mooshin xil ka qaadis oo ka dhan ah madaxweynaha ay horgeeyaan aqalka wakiilada.
Mid ka mid ah sababaha ayaa ah ayada oola rumeysan yahay in ay badan tahay in natiijada baaritaanka Robert Mueller ay noqon doonto mid aan adkeyn oo caddeymo buuxa oo dambiyeed ku heli doonta madaxweynaha.
Sidoo kale, guddoomiyaha guddiga la socoshada iyo isbeddelada ee Congress-ka, Elijah Cummings ayaa ku raacay Pelosi fikirkeeda, wuxuuna sheegay in xil ka qaadista ay u baahan tahay inay taageeraan labada xisbi, taasi oo hadda aan muuqan.
Previous articleGanacsatada waxkala soo dega dekada berbera oo saka aan waxba casguuran kadib markii shirkada Dp World
Next articleNuxurka Heshiisyo Ay Kala Saxeexdeen Hogaamiyeyaasha Itoobiya Iyo Faransiiska